Anoratidza. Anodiwa bhuruu tourmaline. Nyowani nyowani 2021. Vhidhiyo
Chinongedzo chebhuruu ruvara tourmaline ibwe rinoreva uye mutengo.
Tenga zvakasikwa chiratidzo muchitoro chedu
Indicolite isingawanzo mwenje bhuruu kune bhuruu girini mavara akasiyana eeturmaline boka. Iro zita rinobva kune iyo indigo ruvara.
Indicolite tourmaline zvinoreva uye kuporesa zvivakwa zvinobatsira
Bhuruu tourmaline chakras
Ndeupi muto is indicolite tourmaline?
Chii chinonzi indicolite chinoshandiswa?
Chii chinonzi indicolite chakakosha?
Tourmaline inonzi crystalline boron silicate mineral. Mamwe maitiro acho ndea aluminium, iron, uye magnesium, sodium, lithium, kana potassium. Nzvimbo iyi inokosha-inokosha-gemstone rinokosha. inouya mumarudzi akasiyana-siyana.
Sekureva kweMadras Tamil Lexicon, zita racho rinobva pazwi reSinhalese "thoramalli". Boka rematombo anokosha anowanikwa muSri Lanka. Sekureva sosi imwecheteyo, iyo Tamil "tuvara-malli" inobva kuSinhalese mudzi wezwi. Iyi etymology inouyawo kubva kune mamwe maduramazwi akajairika anosanganisira Oxford English Dictionary.
Mifananidzo yakajeka Sri Lankan gem tourmalines yakaunzwa kuEurope. Muhuwandu hwakawanda neDutch East India Kambani. Zvakare, kugutsa chinodikanwa chekuda kuziva uye nematombo. Panguva iyoyo, Isu hatina kuziva kuti schorl uye zvakare tourmaline yaive yakafanana mineral. Imwe, Yakanga ingangoita 1703 kuti yakawanikwa kuti mamwe mavara anokosha aive asiri zirconi. Uyezve, matombo dzimwe nguva ainzi "Ceylonese Magnet". Nekuti inogona kukwezva yozodzosera madota anopisa, nekuda kweayo mapuroelectric zvivakwa. Muzana ramakore rechi19, makemikari akaparadzanisa mwenje nemakristal e-tourmaline nekukanda mwenje pamusoro pechinhu.
Indigo iguru rakadzika uye rakapfuma riri pedyo nejasi rebhuruu. Uyewo kune zvimwe zvakasiyana zve ultramarine. Iro tsika inoratidzika sechivara mumutambo unooneka. Uyewo chimwe chezvisikwa zvinomwe zvehota. Muvara pakati pe violet uye bhuruu. Zvisinei, zvinyorwa zvinopesana nechinzvimbo chaicho chaiyo mu electromagnetic spectrum.
Iro zita remavara indigo rinobva kune iyo indigo dhayi kubva kune chirimwa Indigofera tinctoria. Uye mhando dzakabatana.
Kushandiswa kwokutanga kwakanyorwa kwakanyorwa kweIndigo sezita remavara muChirungu raiva mu1289.
Zvizhinji mukuumbwa nezve Indigo ruvara
Indicolite tourmaline ibwe zvinoreva zviyero zveiyo thymus, pituitary, pamwe nehutachiona gland. Kana zvasvika kune simba rekristaro rekuporesa, ivo vanobatsira mukuderedza marwadzo anokonzerwa nemagraines uye nemusoro. Sezvineiwo, ino kristaro inobatsirawo pakurapa kwezvirwere zvemaziso.
Kristaro yehuro uye chechitatu cheziso chakras, bhuruu tourmaline, kunyanya mune yakasviba mimvuri, inowedzera kuwanikwa kune akakwirira mazinga eiyo intuition uye inogona kuwedzera zvipo zvepfungwa zvekujekesa, clairaudience, clairsentience, chiporofita, uye mweya kutaurirana. Izvo zvinonyanya kubatsira kune avo vanoshuvira kuve chiteshi kana masvikiro, uye vanobatsira mukugadzirisa zvimiro zvakagamuchirwa kubva kune mamwe matunhu uye kuvabvumira kuti vabude nekutaurirana kwemashoko.
Zviratidzo zvinogona kubva pachiedza kusvika kurima rakazara bhuruu bhuru. Kunyangwe kuvezwa kwemavara kuri kwekufona kwekutonga, mazhinji emitambo anotengeswa sebhuruu anomirirwa zvisirizvo. Anoratidza iyo inogona kuve chero mumvuri kana ruvara sekureba sekutangira kwebhuruu.
Zvinoreva chirevo. Iro dombo rinozivikanwa kubatsira mukurapa kweanofema uye ekugaya system system. Iyo inogona zvakare kuenzanisa iyo pituitary, thyroid, uye thymus glands. Simba rekurapa reIkololite kristaro rinogona kubatsira nekurapa kusagadzikana kwemaziso uye kurerutsa marwadzo anouya nemusoro uye migraines.
Iyo mitengo ye tourmaline inosiyana zvakanyanya, zvinoenderana nemhando dzakasiyana uye nemhando. Yakanyanya kudhura ndiyo Paraíba tourmalines, iyo inogona kusvika makumi ezviuru zvemadhora pacarati. Chrome tourmalines, rubellites uye yakanaka indicolite tourmaline mutengo uye bi-mavara anogona kutengesa kune angangoita 1000 $ US pa carat. kana zvimwe. Dzimwe mhando dziripo pamitengo iri pakati pe50 $ kusvika 750 $ US pa carat, zvinoenderana nehupfumi hweruvara.
Natural indicolite iri kutengeswa mune yedu gem shopu
Isu tinogadzira zvishongo zvetsika neIndololite semhete, chishongo, mhete, pendende… Ndapota taura nesu for quote.